Shiinaha Polyethylene Glycol 6000 warshad Peg6000 iyo soosaarayaasha | Yinuoxin
Polyethylene glycol 6000 waxaa lagu diyaariyaa polymerization-ka dareeraha ethcolne glycol ee heerkulka sare, cadaadiska sare ama cadaadiska hooseeya.
Polyethylene glycol 6000 (PEG-6000) Magaca Ingiriisiga: macrogol 6000-992 badeecadani waa isku dar ah ethylene oxide iyo polycondensation biyo, qaaciddada molecular waa ho (CH2CH2O) NH, halkaas oo n uu matalayo celceliska tirada oxyvinyls.
Badeecadani waa wax cad oo dufan adag leh ama budada granular, waxoogaa ur ah. Shayga waa lagu milmi karaa biyaha ama ethanol, laakiin laguma baabi'in karo ether. Barta barafka ee sheygan (Lifaaqa VI d) waa 53 ~ 58 ℃. Viscosity waxay qaadataa 25.0g oo sheygan ah, ku rid dhalo cabirkeedu yahay 100ml, ku dar biyo si ay u milmaan oo ay u milaan cabirka, si fiican u rux, isticmaal muuqaalka 'Pinker viscometer' dhexroorkiisa hoose ee 1.0mm si aad u go'aamiso sida sharciga qabo (Lifaaqa VI g habka 1) ). Nafaqada kinematic ee 40 ℃ waa 10.5-16.5mm <2> / s.
Waxay leedahay cuncun yar oo maqaarka iyo indhaha ah, wayna adagtahay in laqaato mareenka caloosha iyo caloosha kadib maamulka afka, suntuna waa mid aad uyar. Duritaanka 5% (mass) biyo aqueous of polyetylen oxide indhaha bakaylaha sababay gubasho yar. PEO saameyn yar ayey ku yeelatay heerka dhimashada kalluunka, carsaanyo, Anemone, haley ama algae. Xakamaynta iyo xalka aqueque-ka waa sun hooseeya, waana aamin in la isticmaalo oo la maareeyo. Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Maraykanka (FDA) ayaa ansixiyay adeegsiga maadada loo yaqaan 'polyetylen oxide aqueous solution resin oo loogu talagalay baakadaha cuntada gaarka ah iyo waxyaabaha tooska loogu daro biirka.
Celceliska miisaanka molikiyuulka ee sheygan wuxuu ku saabsan yahay 12.5g, oo si sax ah loo miisaamay. Ku rid weel macmacaan ah oo 250ml leh oo joojiye ah, ku dar 25ml pyridine, kululee si aad u milisid, oo u qaboojiso. Marka loo eego habka loo yaqaan 'polyetylen glycol 400', laga bilaabo "xalka pyridine ee lagu daro phthalic anhydride si hufan", celceliska miisaanka molikalku waa inuu noqdaa 5400-7800. Aashitada, caddaynta iyo midabka xalka, iyo hadhaaga dabka shidida waa in la hubiyaa iyadoo la raacayo habka ku cad polyetylen glycol 400.
Faallooyin: shirkadeena sidoo kale waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ah alaabooyin taxane ah PEG.
Hore: Polyethylene Glycol 4000 Peg4000
Xiga: Polyethylene Glycol 8000 Peg 8000
Qaab Yijie R-99 Release Qaab Gudaha ...